महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने डा. सुन्दरमणि दिक्षितको प्रस्ताव – newslinesnepal
महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने डा. सुन्दरमणि दिक्षितको प्रस्ताव
प्रकाशित मिति : ४ चैत्र २०७७, बुधबार १९:५२
काठमाडौं, ४ चैत्र । नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दिक्षितले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारमा जानको लागि मरिहत्ते गर्न नहुने धारणा राखे । र,अहिलेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको लागि सबैभन्दा उत्तम पात्र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर हुने पनि उनको भनाई छ ।
बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले अहिले पार्टीहरु झैझगडामा लागेको टिप्पणी गरे । दलका नेताहरु झैझगडामा उत्रिएकोले देश समस्यामा परेको सुनाए । उनले सबै दलभित्र अहिले आन्तरिक झगडा रहेको दाबी गरे । उनले भने,‘नेकपा एमलोभित्र झगडा छ । संसदमा स्थिरता देखिँदैन् । उनीहरु झगडा गरुन् न, हामीले के पायौं त ? हामीले त नेकपालाई दुई तिहाई मत दिएका थियौं । हामीले खोजेको कुरा यही हो त ? एउटा नेतापनि चोखो छैनन् । सबै नेता नाँग्गै छन् । प्रतिपक्षीले पनि काम गर्न सकेन् । नेपालीले केही पाएनन् ।’
ओलीजीले आफ्नो सरकार निरन्तरता चाहने हो भने विश्वासको मत लिनुपर्छ अवस्था अहिले आएको सुनाउँदै यदि विश्वासको मत लिन ओली असफल भए अर्को सरकार बनाउन प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । संविधानले तत्काल चुनावमा जान नभनेको पनि उनले उल्लेख गरे । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतत्व लिन लोभ देखायो भने कांग्रेस पनि पुरै नाँग्गिने उनको भविष्यवाणी छ । उनले भने,‘अहिले मुलुकलाई असल प्रधानमन्त्री चाहिएको छ । हामीलाई एकदमै असल प्रधानमन्त्री चाहिएको छ । ठूलो प्रोगाम चलाउनु छैन् । स्थिरता विश्वासका साथ लग्नुपर्छ ।’
उनले जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना नरहेको पनि दाबी गरे । उनले भने-“उहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छैन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको के हैसियत छ ? कांग्रेस पनि फुटेको छ । एकता छैन् । बरु, कांग्रेस बलियो बनाएर चुनावमा जाओस । कांग्रेस सरकारमा जानुहुँदैन् । अहिले सरकारमा नजाने हो भने उसले अर्को चुनावमा जित्छ । फाईदा उठाउन सक्छ । उसले सरकारमा जान लोभ र लालच गर्नुहुन्न ।’